Ma jirto wax khilaaf ah oo noo dhaxeeya aniga iyo xukuumadda ama madaxweynaha” | Salaan Media
Home Wararka Ma jirto wax khilaaf ah oo noo dhaxeeya aniga iyo xukuumadda ama...
Ma jirto wax khilaaf ah oo noo dhaxeeya aniga iyo xukuumadda ama madaxweynaha”
May 12th, 2013 “Arrimihii aanu ku heshiinay xukuumadda wax badan baa fulay, wax bandanna way hadhsan yihiin, waanay socotaa”
Hargeysa (SM)-Wasiirka dib u dejinta Somaliland Mudane Saleebaan Ciise Axmed (Xagla-toosiye), ayaa maanta waxba kama jiraan ku tilmaamay inuu is casilayo. Waxaanu ku dooday inaanu jirin wax is afgaran waa ah oo soo kala dhex galay isaga iyo xukuumadda uu ka tirsan yahay.
Wasiirku waxa uu sidaasi ku sheegay mar uu maanta ka soo degay madaarka Hargeysa ka dib markii uu soo dhaamaystay socdaal shaqo oo uu ku tagay dalka Jabuuti. Waxaana madaarka si weyn ugu soo dhaweeyay Wasiirka Duulista Hawadda iyo gaadiidka cirka Mudane Maxamuud Xaashi Cabdi, la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha bariga Mudane Fu’aad Aadan Cadde, Guddoomiye ku xigeenkii koowaad ee Urur siyaasadeedkii XAQSOOR Md. Cali Maxamuud Axmed (Cali Sandulle) iyo masuuliyiin kale.
Wasiirka Dib u dejinta Mudane Saleebaan xagla Toosiye waxa uu tilmaamay inay ku soo guulaysteen hawlo shaqo oo uu ku tagay dalka Jabuuti, isagoo arrintaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi “Waxaan Jabuuti u tagay inaan soo eego qaxoontiga reer Somaliland ee Jooga Jabuuti, kuwaasi oo joogay muddo dheer oo labaatan sanadood ah, hawlihii aan u tagayna way noo hagaageen waxaan u mahad naqayaa dawladda Jabuuti oo noo fududaysay shaqadii aan halkaasi u tagay, isla markaana na soo dhaweysay.”
Wasiirka Dib u dejinta Somaliland waxa uu beeniyay in wax khilaaf ahi dhex yaalo xukuumadda Somaliland,waxaanu meesha ka saaray inuu is casilayo, waxaanu yidhi “Warbaahinta ayaa la weydiinayaa halka ay ka keentay inaan is casilayo. Ma jirto wax khilaaf ah ama is afgaran waa ah oo noo dhaxeeya aniga iyo xukuumadda Somaliland ee aan ka tirsan nahay ama madaxweynahaba.Waa Arrin iska ku tidhi ku teen ah.”
“Ta kale arrimihii aanu ku heshiinay xukuumadda wax badan baa fulay, wax bandanna way hadhsan yihiin, waanay socotaa. Waxaan rajaynayaa inaanu dhammaantood fulino,”ayuu sheegay Wasiirka Dib u dejinta Somaliland.